WARARKA BARAAWEPOST axad 6 april 2008
Madaxa xafiiska qaramada midoobey ku leedahay dalka Switzerlandoo waraaqihii aqoonsiga danjirenimo ka guddoomey danjire Yuusuf Bari-Bari
Malinimadii jimcaha ahayd oo bisha Abril ahayd 4, 2008 saacadda Swiss/ka markii ey aheyd 3 iyo 21 daqiiqadood ee galabnimo ayaa Maareeyaha Guud ee xafiiska Jimciyadda Qaaruumaha ka dhexeysa ku leedahay magaalada Geneva ee Dalka Switzerland, Mudane Sergei Ordzhonikidze wuxuu Danjire Mudane Yusuf Maxamed Ismaaciil "Bari-Bari" si rasmi ah uga guddoomey warqaadda lagu magacaabey.
Warqaddaan lagu magacaabay danjire Bari-Bari waxaa saxiixey Madaxweeynaha Jamhuriyadda Soomaaliya Mudane Cabdullahi Yusuf Axmed.
Danjire Dr Yuusuf Ismaaciil Bari-Bari waxaa loo magacaabey Ergeyga Joogtada ee Soomaaliya u fadhiyi doona xafiiska jamciyadda qaramada midoobey ay ku leedahay magaalada Genevaiyo Hay'adaha Caalamiga fadhigoodu yahay dalka Swiss/ka.
Munaasibadda guddoonka warqadda magacaabista Danjiraha waxaa goobjoogayaal ka ahaa madax kale oo ka socotay UNka, Marwada Danjiraha marwo Zamzam Jaamac Abshir "Dhoorre" iyo Danjiraha DFKMG Soomaaliyeed u magacawdey Boqortooyada Ingiriiska & Barwqasooranka” Commonwealth”, Mudane Cabullatif Maxamuud Cabdi.
Xilka loo magacaabey Danjire Mudane Yusuf Maxamed Ismaaciil "Bari-Bari" waxaa lagu ansixiyey shir ey yeesheen Golaha Wasiirada DFKMG Soomaaliya bishii Juun 2007 kaasoo ka dhacey Caasimadda Dalka Soomaaliya, Magaalada Muqdisho.
1 Maarso 2008 Danjire Mudane Yusuf Maxamed Ismaaciil "Bari-Bari" waxaa lagu hor dhaariyay Madaxweeynaha Jamhuriyadda Soomaaliya Mudane Cabdullahi Yusuf Axmed, Ra'isul-Wasaaraha DFKMG Mudane Nuur Xassan Xusseen, Ku-Xigeenka Koowaad Ra'isul-Wasaaraha DFKMG Mudane Saalim Caliyow Ibrow, Wasiirka Arrimaha Dibedda Mudane Cali Axmed Jaamac, Wasiiradda Haweenka iyo Hor-u-Marinta Qoyska Marwo Khadija Maxamed Diiriye, Wasiirka Hawlaha Guud iyo Dib-u-Dejinta Mudane Nuur Iidoow Beyle iyo Mas'uuliyiin kale ee ka tirsan DFKMG Soomaaliyeed.
Danjiraha Soomaaliyeed Mudane Yusuf “Bari-Bari” ka dib markii uu ka soo degey magaalada Geneve 20 Maarso 2008 wuxuu u guda galey shirkii 7aad ee Golaha Xuquuqal-Insaanka ee JQ ka dhexeeysa oo dhamaadeey 28 Maarso. Danjiraha Soomaaliyeed wuxuu ku guda jiraa kulamo uu la leeyahay Xubno ka tirsan Jaaliyadda Soomaaliyeed oo ku nool Dalka Swiss/ka, Madaxda Dowladda Swiss/ka iyo Danjirayaal dalal kala duwan.
Soo dhoweeynta gaarka ah ee loo fidiyey waxaa kaloo markhaati u ah in uu labo khudbad ka jeediyey Shirka 7aad ee Golaha Xuquuqal-Insaanka JQ ka dhexeeysa ee Jenefa ka hor inta aan si rasmi looga guddoomin warqadda lagu magacaabeey.
Danjiraha Soomaaliyeed waxaa sugaya hawl lixaad leh oo ay ugu horreyso dib-u-nooleeynta Xafiiska Ergada Joogtada Soomaaliyeed ee JQ ka dhexeeysa ee Geneve.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ku nool Dalka Swiss/ka waxaa looga baahan-yahay in ey si wanaagsan oo Soomaalinimo ku dheehan-tahay ula shaqeeyaan Danjirahooda iyagoo si gaar ah u eegeya danahooda iyo mustaqbalka ubadkooda.
Sida la ogsoonyahay burburkii Dalkeena ku habsadey ka dib tirada Soomaalida ku nool Dalka Swiss/ka aad beey u korortey. Maadaama uu Danjiraha sidoo kale u xil-saaraanyahay xiriirka u dhexeeya Jamhuriyadda Soomaaliya iyo Dalka Swiss/ka waxaa laga filayaa in uu sare u qaado xiriirka labada dal iyo in uu u doodo xuquuqda Soomaalida ku nool Dalka Swisska.
Isla maalinta Danjiraha Soomaaliyeed Mudane Yusuf “Bari-Bari” laga guddoomayey warqadda lagu magacaabey ayaa dad kor u dhaafaaay 1000 qofood oo ka tirsan Jaaliyadda Soomaaliyeed ku nool Swiss/ka ayaa marka ugu horreysey iyagoo mideeysan waxeey ku hor-mudaaharaaddeen Baarlamaanka Fedeeralka ee Switzerland oo ku yaal magaalada Caasimadda ee Bern, waxeeyna u doodayeen xuquuqdooda.
DFKMG ee Soomaaliya, gaar ahaan Wasaaradda Arrimaha Dibedda iyo Is-kaashiga Caalamiga waxeey si gaar ah ugu hawlan-tahay in ey xoojiso xiriirka Caalamiga ah ayadoo kaashaneysa Safaaradaha Soomaaliyeed oo intooda badan uu si xun u saameeyey burburkii Dalkeena inkastoo ey jiraan Diblumaasiyiin Soomaaliyeed ey taarikhdu si wanaagsan u xusi doonto waayo waxeey ilaaliyeen sharaftii iyo karaamadii Soomaaliyeed waxeeyna ku mintideen hantidii Dalkeena dibedda u tiil. Waxaa aad iyo aad lagama maarmaan u ah in ey Safaaradaha Soomaaliyeed sida ugu dhaqsi badan si dhab ah u hawl-galaan si eey u guttaan waajibaadka saaraan kaasoo ah in ey sare u qaadaan xiriirka iyo is-kaashiga Caalaamka oo ey Ummadda Soomaaliyeed sida gaarka ah ugu baahan-tahay. Dhanka kale Beesha Caalaamka waxeey soo dhoweeyneysaa xiriirka diblumaasiyadeed ee Soomaaliya maadaama ey qaaradaha adduunka iyo dalalka deriska ah ey u haajireen Soomaali aad iyo aad u tira badan kuwaasoo u baahan daryeel dhab ah iyo in loo dodo xuquuqdooda.
Taariikh koobaan oo ka sheekeyneysa xiriirka ka dhexeeya magaalada Geneva iyo UN ka
Magaalada Geneva ee dalka Swtzerland 15 Nofembar 1920 waxaa si diiraan loogu soo dhaweeyey ergo ka qeeyb gashey shir-weeynihii ugu horreeyey ee Ururkii Dalalka Adduunka. Go’aannada shirkaas waxaa ka mid ahaa in magaalada Jenefa loo aqoonsado saldhigga Ururka Siyasadeed Caalamiga ee ugu horreyey taariikhda adduunka.
Xog-hayayaashii Ururkii Dalalka Caalamka waxeey saldhig ka dhigteen daarta Genevaku taal oo loo yaqaan Daarta Wilson. Sannadkii 1936 waxaa xariga laga jarey Daarta weeyn lagu magacaabo Daarta Dalalka, taasoo Ururku degey. Nasiib darro Ururkii Dalalka wuxuu baajin waayey dagaalkii adduunkii labaad.
1 Febraayo, 1942 Madaxweeynihii Mareekanka oo la oranjirey Franklin Delano Roosevelt wuxuu beddeley magicii Ururkii Dalalka wuxuuna u bixiyey Jimciyadda Qaaruumaha ka dhexeeysa.
26 Juun, 1945 wakiillo ka kala socdey konton dal waxeey magaalada San Franciscoee Dalka Mareekanka isku raaceen Dastuurka JQ ka dhexeeysa.
JQ ka dhexeeysa waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqey 24 Oktoobar 1945 ka dib markii ey 50 dal si rasmi ah u ansixiyeen Dastuurka ey wakiiladoodu diyaariyeen.
Bishii Abril 1946 go’aanadii Shir-weeynihii ugu dambeeyey ee Ururkii Dalalka oo lagu qabtey magaalada Jenefa waxaa ka mid ahaa in hantidoodi oo dhan ey ka mid tahay Daarta Dalalka lagu wareejiyo JQ ka dhexeeysa Xafiiskeeda Yurub.
1 Febraayo, 1966 magacii ahaa Xafiiska Yurub ee JQ ka dhexeeysa waxaa lagu beddeley Xafiiska JQ ka dhexeeysa ee Jenefa.
Saldhigga JQ ka dhexeeysa ee Jenefa marka laga reebo Diblumasiyiinta matala Dalalka adduunka oo dhan waxaa ka hawl-gasha tira gareeysa 1.600 qofood waxaana sanadkasta lagu qabtaa illaa iyo 8.00 shirar caalami ah. Saldhiggaan waa kanugu weeyn ee JQ ka dhexeeysa. Magaalada Jenefa waxaa ka howl gala hay’adaha addunka u xil-saaran dar-yeelka bani-Aadanka.
WAXAAD HALKAN HOOSE KA AQRISATAAN WARBIXINO KU SAABSAN SOOMAALIDA SWITZERLAND